Iyiphi ithuluzi lokuthola igama elingukhiye le-Amazon ongangincoma ngalo kangcono?
Ukuqalisa ukucwaninga kwegama elingukhiye olujulile kubaluleke kakhulu ekuhloleni kwakho kwemikhiqizo ye-Amazon, njengokusho kokusingatha isu elilungile ku-Search Engine Optimization. Ngokungangabazeki, wonke umthengisi ophumelelayo we-ecommerce kufanele abe namathuluzi atholakele we-Amazon elingukhiye we-keyword ukuze athole ndawonye isu elihle lokumaketha. Ukuthembela kuphela kudatha yemininingwane yangempela, nokusebenza ngokuqhubekayo ukuze ukwandise amakhasi akho womkhiqizo wokuhlonza okuthuthukisiwe ekusesheni oku-intanethi - nansi okwenza ukuthengiswa okuthuthumayo kuwo wonke ama-webstore e-ecommerce. Ngakho, ngenzansi ngizokuhlunga amanye ama-discoer angukhiye angukhiye we-Amazon best and amathuluzi okucwaninga - ukuhlala uhlaziywa njalo futhi uqhubeke usebenza isinyathelo esisodwa ngaphambi kwabancintisana bakho abaseduze kakhulu.
AmzSuite - isofthiwe yokuthola igama elingukhiye le-Amazon elingasiza kakhulu ukwazi konke mayelana nemikhiqizo edayiswa kakhulu Abathengisi abahamba phambili, Izici eziphakanyisiwe, kanye nokukhishwa okusha okusha. I-AmzSuite inezinto ezizungeze izigaba ezingama-67 eziyizinkulungwane ezingu-67 (i-Amazon UK ne-Amazon US) futhi zizofanelana kangcono nebhizinisi elikhulu le-ecommerce, kanye nabachwepheshe abaqeqeshwe kahle ku-SEO. Yiqiniso, kunikezwa ukuthi banenhlanhla yokwazi ukwenza okuningi kule thuluzi elinamandla amakhulu kangaka.
I-Kparser - ingenye ithuluzi lokuthola igama elingukhiye le-Amazon, ngalesi sikhathi ngendlela engokoqobo. Into yukuthi i-Kparser ingase isekele abathengisi be-drop-shipping ngegama elingukhiye eliphambili kanye neziphakamiso zegama elide lomsila. Ukuqoqa idatha eningi ngokujulile ngezihlungi ezithuthukisiwe, le ndlela yindlela engcono kakhulu kulabo abathengisi abasenayo izinto eziningi zokwenza. Ngisho isici esiyingqayizivele se-Kparser yindlela elula yokuchofoza yokuphatha, ukuhlunga, nokubeka ngezigaba ezitholakalayo ezingagcwaliswa kalula cishe ngesivinini sokukhanyisa.
MerchantWords - iyithuluzi lokuthola igama elingukhiye le-Amazon elingcono kakhulu, ngaphandle kwalokho elisetshenzisiwe amapulatifomu e-ecommerce futhi. Ithuluzi le-MerchantWords linomlando omkhulu ohlanganisa amagama angukhiye angaphezu kwezigidi ezingu-170 zama-Amazon asetshenziselwa abathengi bangempela yokudaywa kwansuku zonke. Phakathi kwamanye amahlangothi aqinile alo msizi we-intanethi, ngingathanda ukugcizelela ukuthi kungaba yisisombululo esifanelekisiwe ngokukhethekile kubathengisi abangenalwazi oluncane noma abaqalayo bokuthungela ukuthutha - azikho amakhono aqinile ku-SEO adingekayo ukwenza okuningi ngaphandle kwakho ucwaningo lwamagama angukhiye kanye nokusetshenziswa okuwusizo kokufakwa ohlwini komkhiqizo ngempela.
I-Keyword Tool Dominator - ifika njengendlela yokugcina yegama elingukhiye elizofakwa ohlwini namuhla. Abantu bathi igama lesithuluzi liyazikhulumela - njengoba kunabasebenzisi abangaphezu kuka-15 000 abemi bexhomeke ku-database yegama elingukhiye ukuze bathuthukise ukuthengisa kwabo, futhi baze bahloniphe nakwezinye izindawo, isibonelo ngesiteshi somuntu siqu ku-Google. Ngakho-ke, uma udinga ulwazi olunembile kuphela, khona-ke kufanele ukuthi uthole i-Keyword Tool Dominator yakho eyodwa-stop-shop - zama nje i-akhawunti yakhe eyisisekelo mahhala, futhi ucabange ukujoyina umphakathi nge-full fat fat version etholakalayo into engama-dollar angu-50 Source .